5 ဥရောပမှာတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အမြဲမိသားစုပတ်ပတ်လည်ဆုံလည်အလွန်ရိုးရာအားလပ်ရက်ခဲ့, ကြက်ဆင်, နှင့်ဘောလုံး. သို့သျောလညျး, ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးအလျင်အမြန်ထွက်ခွာသွားနိုင်သည်ကိုနှစ်သက်သောသူများသည်ဥရောပရှိ Thanksgiving သို့သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတွင်ဤနှစ်အားလပ်ရက်ရာသီကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသင့်သည်.
အဟောင်းကိုတိုက်ကြီးကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဘို့သွားရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများရှိပါတယ်. ဥရောပတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ကြီးအထင်ကြီးသော်လည်း, မြို့ကြီးများသာရွေးချယ်ရန်စုံတွဲကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဘို့သွားရောက်စစ်မှန်စွာအလွများမှာ.
ဥရောပများသောအားဖြင့်ခရီးသွားဧည့်နှင့်အတူရေအလွန်ထူထပ်ဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်တဦးတည်း နှောင်းပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလများအတွက်တူညီမပြောနိုင်ပါဘူး. ထို့ကြောင့်ဤနှစ်၏ဤအပိုင်းသည်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများ ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံခြင်းရိုးရာအစားအစာများနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကျဆုံးခြင်းအရောင်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးပါ.
ကျွန်တော်ကောက်ယူကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဘို့သွားရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစတင်နိုင်ရန် – အသုံး, ဘယ်လ်ဂျီယံ
ဒါကြောင့်အတိုဝတ်ရန်, Bruges အမှန်တကယ်မှော်မြို့ဖြစ်၏ အခြို့သောအဟောင်းများကိုရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ထဲကနေဖြောင့်လာမယ့်. သဘာဝကျကျ, ဘယ်မှာအပေါငျးတို့သအလှတရားမုသာစကားအဟောင်းမြို့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအလယ်ခေတ်ခေတ်ကနေဖြောင့်လာ, ဒီမှာသင်ရှေးခေတ်နှင့်စိတ်ကိုဖမ်းစားအဆောက်အဦးတွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်လှေစီးပြီးယူ မြို့ရဲ့ Unreal တူးမြောင်းမှတဆင့်အပေါင်းတို့နှင့်အတူသစ်ရွက်ဖုံးအဆောက်အဦးမှာအံ့သြစရာအတွက်ကြည့်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနိုဝင်ဘာလင်, အရာအားလုံးကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အဆင်းလှကဆြုံးအရောင်များမှအပို dreamlike ကြည့်.
သငျသညျဥရောပအတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်များအတွက် Bruges သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းတဲ့မသွားနိုင်. သင်ပင်တတ်နိုင်သမျှ ဒီမြို့ကမှရထားပေါ်တွင်ခုန် မြေတပြင်လုံးအတှေ့အကွုံအပိုမယုံနိုင်စရာအောင်! ငါတို့သည်သင်တို့အဖြစ်မကြာမီသင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်ပြီးဆုံးအဖြစ်သေချာပါသည်, သင်ဤဝေမျှပါလိမ့်မယ်5ဥရောပ blog post တစ်ခုတွင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဘို့သွားရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ.
Bruges ရထားမှ Utrecht
အဆိုပါဟိဂ် Bruges မှရထား
N ကိုorway ဝေးအအေးမြောက်ဘက်၌တည်ရှိ၏, ဒါပေမယ့်အော်စလိုထဲမှာကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်ပါသည် တိုင်းပြည်တောင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ. အဆိုပါမြို့အရှင်အေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုကိုချစ်ပေမယ့်နေဆဲနော်ဝေ၏ဖြန်းဖြန်းထအအေးမိ ယူ. မသွားနိုင်သောသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်.
အော်စလိုအပေါငျးတို့သမှုကြောင့်ယခုနှစ်၏ဤအပိုငျးတှငျအမှနျတကယျရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည် မှော်ကျဆုံးခြင်း တောတောင်ရှုခင်း. Plus အား, သင်တွေ့မြင်ရ မြောက်ပိုင်းအလင်းများ အရာအကောင်းဆုံးဤတိုင်းပြည်တွင်တွေ့မြင်နေကြ, ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအဘယ်အရာလိုအပ်နိုင်?
သင်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်အစားအစာများ၏ရိုးရာကျေးဇူးတုံ့ပြန် type ကိုမတှေ့စေခြင်းငှါ,, သို့သော်သင်ရှိသည်ဖို့ get အတွေ့အကြုံကြောင့်ရကျိုးနပ်ထက်ပို. မီနူးသင်လိုချင်သောချင်ပါတယ်သကဲ့သို့မတူကွဲပြားမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်း, နော်ဝေနေဆဲကမ်းလှမ်းမှုကိုမှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစားအစာများတွေအများကြီးရှိသည်. ဥပမာ, ပြီးနောက် ရိုးရာနျောဟော့ဒေါ့ဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်အမဲသားစတော့ရှယ်ယာအတွက်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်ရစ်ရဲ့ lefse, မုန့်ညက်နေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦး flatbread, အာလူး, နို့နှင့်.
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အများပြည်သူပန်းခြံများနှင့်အဟောင်းရဲတိုက်ကနေဗိုက်ကင်းရန် ပြတိုက်, သင်တစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မယ် အော်စလိုအတွက်လုပ်ဖို့အများကြီး. ကျနော်တို့သင်ဤခမ်းနားမွို့၌ဖွင့်ရက်အနည်းငယ်ထက်ပိုသုံးဖြုန်းချင်ပါလိမ့်မယ်သေချာများမှာ.
အော်စလိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြောက်ဘက်ခြမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်5ဥရောပတိုက်တွင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဘို့သွားရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ.
သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်လန်ဒန်ကိုကျော်သွားလို့မရဘူး. လူတိုင်းကအကြောင်းကြားသိထားပါတယ်, လူတိုင်းကချစ်သောသူ. ပင်ပိုကောင်းမယ့်အဘယျသို့, သင်ကဆြုံးထဲမှာအတူမေတ္တာ၌ကရြောကျပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါမြို့ကြီးမားဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့် offseason ရှိဖြစ်ခြင်းဟာများသောအားဖြင့်အချို့သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါသည် လူစည်ကားနေရာများ.
များအပြားဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပျက်မှာဤအချိန်အနှစ်, ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုများပန်ကာနေလျှင်, သငျသညျကိုခစျြပါလိမ့်မယ် လန်ဒန်. ထို့အပြင်, ယင်းဥယျာဉ်များ ဆောင်းဦးရာသီအတွက်အံ့သြစရာထက်ပို. Kensington ဥယျာဉ်, ဂရင်းနစ်ပန်းခြံ, နှင့်ဝင်ဆာ ဂရိတ်ပန်းခြံ သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်များစွာသောသဘာဝမိုဃ်းကောင်းကင်ကိုတချို့ရှိနေပါတယ်.
အစားအစာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်းစားပါသောသင်၏သူများသည်, မင်းကလန်ဒန်မှာမင်းရဲ့ရှယ်ယာတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်. ဒီမှာအစားအသောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုအထင်ကြီးခြင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွင်းအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်တဦးတည်းပြန်သကဲ့သို့မတူကွဲပြားဖြစ်ပါသည်. လူတိုင်းရဲ့အရသာအဘို့အရာတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်.
လန်ဒန်ခရီးသွားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုတိုက်ကြီးကနေသွားအများအပြားကျော်ကြားရထားလိုင်းများရှိပါတယ်ကြောင်း လန်ဒန်ဥရောပမှာ, ကနေသူမြားကိုနဲ့တူ အမ်စတာဒမ်, ပဲရစ်, နှင့် ဘာလင်, ကျေးလက် sightseeing နှင့်ဖြတ်သန်းတဲ့ခမ်းနားအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်အားလုံးသော , La Manche - အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားအောက်ဒါမှမဟုတ်ပြင်သစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်အဖြစ် Eurotunnel.
သငျသညျဆက်ဆက်အကြောင်းကိုငါသိ၏ ဆွစ်ဇာလန်, ထိုသို့မှော်တောင်များရဲ့, သင်မူကား, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိ Lugano အကြောင်းကိုကြားသိကြပြီမဟုတ်. ဒါဟာဆွစ်ဇာလန်၏တောင်ဘက်တစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့ရဲ့, အီတလီနှင့်အတူနယ်စပ်နှင့်နီးစပ်သော.
အဆိုပါမြို့သည် mesmerizingly ပြာကမ်းခြေပေါ်မှာ အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း၏အောက်ခြေတွင်ရေအိုင်, ရာနီးပါးမှော်အသံ. ဒါကတကယ်တော့ တယောက်တည်း သင်မှန်အဲဒီမှာဥရောပ၌သင်တို့၏ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖြုန်းဖို့ရရန်လုံလောက်ဖြစ်သင့်, Lugano သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမြို့များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းအတွက်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်.
ထို့အပွငျ, ရထားမှတဆင့်ဤမြို့နှင့်ကနေခရီးသွားလာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးဒီကဗျာအတွေ့အကြုံ. ဒါကဖြစ်ကောင်းဥရောပအရှိဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒေသများတစျဦး၏အလှတရားကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း. ထို့အပြင်, သငျသညျအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၏ခရီးစဉ်ကိုခံစားမယ် စိတ်ကူးရထား သူတို့ကိုယ်သူတို့, အဖြစ် ဆွစ် ၏တဦးတည်းရှိတယ် ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးရညျအသှေးရထား.
Lugano ရထားမှ Bern
Lugano ရထားမှ Lucerne
ဇူးရစ် Lugano မှရထား
ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်သည်အလင်းအိမ်၏ထာဝရမြို့ skip ဖို့မတတ်နိုင်. ပဲရစ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အမြဲကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်မြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်မကြာခဏလမ်းသိပ်နောက်ကျနိုဝင်ဘာလသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စုံလင်သောအချိန်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်စည်ကားရဲ့. Plus အား, သင် spellbinding ကျဆုံးခြင်းအရောင်များကိုစိတ်ထဲမည်မဟုတ်.
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, နိုဝင်ဘာလအတွက်ပဲရစ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Instagram အဘို့ပရဒိသု. သင်ကဒီမှာနေဓါတ်ပုံတွေကိုယူရပ်တန့်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်. အနည်းဆုံး, ကြောင်းသင်သည်အစဉ်အမြဲသတိရပါ့မယ်သောခရီးစဉ်အရသေချာပါလိမ့်မယ်.
အစားအစာများအတွက်အဖြစ်, ကောင်းစွာ, သင်ကပြင်သစ်အတွက်ဘယ်လောက်သိကြ; နှင့်မှတပါး, ပဲရစ်အဆိုပါဖြစ်ပါသည် gastronomic ကမ္ဘာ၏မြို့တော်. တစ်ဦးကျေးဇူးတုံ့ပြန် Recreating အရှင်အလွန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်, သင်တစ်ဦးမီးတောက်ထည့်သွင်းဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်. သငျသညျတခြားကြောင့်တစ်နေရာရာကိုပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. သာ ပဲရစ် ပင် pickiest ခရီးသွားကြောင့်မိန်းမောတွေဝေကြလိမ့်မည်သောအစားအစာနှင့်အပန်းဖြေပူဇော်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါစွန့်စားမှုလေနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာရန်ဖြစ်ပါသည် ရထားဖမ်း နှင့်ပြင်သစ်ကျေးလက်ဖြတ်သန်းသွား. ဒါဟာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုဖွစျလိမျ့မညျ!
ကျနော်တို့ပေါ်မှာနှင့်ထိုမြို့အကြောင်းပြောနေတာအပေါ်သွားနိုင်. ထို့အပြင်, ကျနော်တို့အကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင် အခြားနေရာများ ကြောင်းကိုလည်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်န်းကျင်ကသင်၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးထိုက်. ၏တစ်ခုလုံးကိုဘာသာစကား Bavarian ဒေသ ဂျာမနီ, အဆိုပါ အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း မီလန်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်, စကော့တလန်, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ. ဥရောပတိုက်တွင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောဤအရပ်တို့ကိုမဆိုတစ်ဦးအမှတ်ရစရာအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်.
သငျသညျအဆုံး၌သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်နေရာတိုင်းမှာ, သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ရထားခရီးသွားလာ. ကျနော်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆိုပါတယ်လိုပဲ, သငျသညျရထားလမ်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမဟုတ်လျှင်ထိုအသောနေရာများအချို့ကိုသင်အမှန်တကယ်ပြီးပြည့်စုံသောအတှေ့အကွုံကိုမပေးပါလိမ့်မယ်. သာကြောင်းလမ်းသင်အမှန်တကယ်ဥရောပ၏ပဉ္စလက်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုဆက်သွယ်ပါ ကျေးဇူးတင်စကားနီးပါးဤနေရာတွင်ရှိသောကြောင့်သင်၏လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သငျတို့သက de မှ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကား / ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
europetravel လန်ဒန် longtrainjourneys ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelbelgium travelfrance .ရာဝတီ travelswitzerland
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား